Gaas oo dib ugala noqdey lacag lagu wareejiyey culimada Puntland
GAROWE, Puntland- Kadib markii Madaxweynaha dowlada Fedeaalka ee Somalia Maxamad Cabdulahi Farmaajo amrey in maamulada dalka ka jira loo qaybiyo dakhligii kasoo xeroodey murashaxiintii u tartameysay xilka Madaxweynaha Somalia 2017 kaasoo loogu talagalay in la gaarsiiyo shacabka abaarahu ku habsadeen ayaa wararka warsidaha Garowe online soo gaaraya waxaa sheegayaan in Madaxweynaha Puntland uu is-hortaag ku sameeyey in lacagtaas lagu wareejiyo guddiga abaaraha oo ay hormuud ka yihiin culimada Puntland.
Lacagtaan oo cadadkeeda lagu sheegey 150,000USD ayaa sida warsidaha GO fahansan yahay waxaa markii hore madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakim Cumar Camey ku wareejiyey guddiga culimada ee abaaraha balse amar kasoo baxay madaxweyne Gaas ayaa dib looga soo celiyey.
Madaxweyne Gaas oo amarkaan soo baxshey isaga oo Puntland ka maqan ayaa la garaneyn sababta keentey inuu amarkaan soo baxsho balse warar ayaa sheegaya inuu diidan yahay howlaha gargaarka ay culimadu ka Wadaan dhulku abaaruhu saameynta ku yeesheen.
Dadaalka lagula tacaalayo abaaraha ba'an ee ka taagan degaanada Puntland ayaa waxa hogaaminayo culimada, shacabka iyo ganacsatada kuwasoo bilihii lasoo dhaafayey u qaaraamayey dadka ay saameynta ku yeelatey abaaraha.
Madaxweynaha Puntland oo dhowaan socdaal ku tagey degaanada ay u guureen dadka abaaraha dhibaatada kasoo gaartey ayaa raashinka uu geeyey deegaanadaas waxaa ku deeqey ganacsatada fadhigoodu yahay magalaada Bosaso.
Shacabka Puntland ee kaalmada gaarsiiya dadka la ildaran abaaraha ayaa deeqda ay bixinayaan waxay ku aaminaan culimada madaama hay'adaha dowliga ah ee ka jira Puntland musuqmaasuq baahsan saameeyey.
GAROWE, Puntland- Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo dib ugu soo noqdey magaalada Garowe kadib markii uu magaalada Muqdishu kaga soo qayb galay kulan looga hadlayo arimaha abaaraha ayaa sheegey in lacag 150,000 ah ee dowlada Federaalka horey ugu deeqdey dadka ...
Soomaliya 18.03.2017. 09:29
Dowladda Somalia oo arrinta Abaaraha kala hadashay hay'adaha QM
Soomaliya 13.03.2017. 17:44
Xoghayaha Guud ee QM oo tagi doona Kenya
Caalamka 04.03.2017. 23:49
Farmaajo oo shir guddoominaya kulan ka socda Xalane
Soomaliya 28.02.2017. 12:24